Ikhukhamba - zemifino ukuthi kuthandwa kakhulu usawoti kanye zicwiliswe. Basuke kabanzi besifazane. Ngempela, ukhukhamba zifakwe emanzini anosawoti ngokwabo Ungadla esiphundu, ngaphezu, angase ukungezwa salads ahlukahlukene, futhi ngisho ezinye izitsha ashisayo.
Ungadliwa for pickling ukhukhamba kunabaningi kangaka. Kodwa ikhona imithetho jikelele okumele ilandelwe lapho ukuwafaka. Ngokwesibonelo, ungasebenzisi i marinades ikhukhamba isaladi izinhlobo, ngefomu siphelile imifino efana zithambile futhi kunganambitheki. Ngaphambi kokuba uqale ukuwafaka ukhukhamba efiselekayo cwilisa emanzini abandayo amahora amaningi nelesithupha, yenze imifino nokunwebeka ngaphezulu kanye crispy.
Ukuze uthole ukhukhamba esihlwabusayo pickled izimbiza nge imifino, engeza izinongo ezahlukene - amahlamvu horseradish, izambulela dill, imbewu coriander, clove sikagalikhi kanye nezinye imifino kanye nezinongo. Ukuze wenze ukhukhamba inqaba efiselekayo sokwenezela ezinkathazweni amabhange amahlamvu oki.
Ukupheka ukhukhamba zifakwe emanzini anosawoti noma inzalo bungatholakala ngokusebenzisa yokugcwalisa kathathu. Esimweni sokuqala, imifino olungiselelwe kanye izinongo ibekwe embizeni, ugcwalise kadokotela yabo okulungiselelwe marinade, ikhava izimbiza zamabhodlela wafaka inzalo amanzi abilayo. Ilitha izimbiza bavame ukuqhubeka ngokwanele amanzi abilayo imizuzu engu-15, ngemva kwalokho, bona ngobumnene asuswe Sterilizer futhi hermetically uphawu. ikhukhamba asongwe kungcono hhayi ukubeka ngaphansi "elingenamikhono" ngoba zithambile. Ukuze ugweme lokhu ethile, amathini kuphole emoyeni.
Lapho indlela ukulondolozwa by ekubunjweni kathathu, ukhukhamba ezibekwe amabhange ngendlela efanayo njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala. Khona-ke uthele amanzi phezu amabhange abilayo futhi embozwe ngesivalo, sukuma kufikela amanzi selehlile igwebu esimweni efudumele. Khona-ke elachithwa kusukela amathini (lid Ukugunda nge izimbobo) nokuhlelwa kabusha ugcwalise ngamanzi abilayo. Kuze amanzi epholisa phansi yesibili ethela, ukulungiselela marinade, usebenzisa uketshezi akhishwe amathini. Lapho ngiyoshumayela okwesithathu, amabhange wathela amanzi ashisayo ayisekho, futhi marinade abilayo futhi ngokushesha Roll.
Futhi manje iresiphi, usebenzisa okuyinto ungakwazi ukulungiselela ukhukhamba zicwiliswe. Ngezinye amakhilogremu amathathu ukhukhamba (ukugeza, cwilisa emanzini, usike amathiphu) kudingeka engamakhulu amagremu usawoti kanye noshukela, isigamu ilitha uviniga (6%), 10 umfire ishiya, 50 uphizi elimnyama allspice, amashidi ezinhlanu horseradish 40 Izinto uhlobo lwembali enephunga elimnandi . Ngesicelo lamabhange, ungakwazi ukwengeza clove sikagalikhi, tincetu isanqante, izambulela noma imbewu fennel futhi tincetu pepper amnandi. Ukusebenzisa lolu iresiphi kungenziwa kuphekwe ukhukhamba futhi ngolokuqala futhi indlela yesibili.
Kodwa konke lokhu zokupheka for amalungiselelo imifino ebusika. Futhi yini okufanele uyenze uma ikhukhamba okunosawoti wafuna kwesokudla manje? Kulokhu, ungasebenzisa iresiphi for ukhukhamba zifakwe emanzini anosawoti. Izindlela ukupheka lokhu isidlo esihlwabusayo okusheshayo, lapho kuvame. Sitshele ukuthi singakwenza kanjani ukhukhamba zifakwe usawoti omnene.
Ngokwesibonelo, ungasebenzisa le iresiphi elula. Thatha ikhukhamba, ugeze, uyonquma kuphelile. Uma uke wathola zezinhlobo ezinkulu kakhulu, kubalulekile ukwenza kubo elilodwa noma amabili longitudinal wokubhoboza ummese. Bese wengeza i-imifino endishini efanelekayo, banezela izinongo (horseradish leaf, garlic, dill, allspice). Manje silungiselela isixazululo kanye nelitha elilodwa lamanzi ukuthatha isipuni esigcwele ushukela nosawoti. Ubilise le ngxube sigcwale abilayo brine ukhukhamba. Thina shiya etafuleni ukuze kuphole, wayesezibeka abandayo. Ngemva kwamahora angu-10-12, isidlo usulungile.
Kodwa ngisho iresiphi elula - ezomile salting ukhukhamba, kuleli cala, alikhulumi nanokukhuluma kufanele ukupheka brine. Ezintsha imifino usawoti sizokwazi kucwazi. Thatha 10-12 ikhukhamba encane, geza, uyonquma kuphelile. Beka imifino esikhwameni, lapho ingezwe dill, amahlamvu currant, garlic kanye yimuphi izinongo ngendlela esilindele yakho. Thela Manje kukhona ingcosana ehloniphekile kasawoti, isikhwama kufuthwe, futhi uvalwe wokubopha, imifino kahle exubile kanye nezinongo. Sabeka isikhwama endishini bese uthumela efrijini. ukhukhamba anosawoti eliyolungela zokukhonza, kamuva amahora amathathu.
Pie kuhhavini namazambane. Pie ne inyama namazambane kuhhavini
Amazambane lenyama multivarka
Ubuningi be-molybdenum, izakhiwo zayo zomzimba nezomzimba, izinhlanganisela, isicelo
Hetman Ukraine futhi babamba iqhaza elikhulu ekuqambeni umlando
GTA 5, ungayenza kanjani imali: Izimfihlo